नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : काँग्रेस नेता खुमबहादुर खड्काले आफ्नो पार्टी काँग्रेस र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह मिल्नुपर्ने बताए !
काँग्रेस नेता खुमबहादुर खड्काले आफ्नो पार्टी काँग्रेस र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह मिल्नुपर्ने बताए !
काँग्रेस नेता खुमबहादुर खड्काले आफ्नो पार्टी काँग्रेस र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह मिल्नुपर्ने बताएका छन् । बीपी मेमोरियल स्टुडेन्ट फाउन्डेशनले शुक्रबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा उनले संकटमा परेको राष्ट्रियता जोगाउन काँग्रेस र ज्ञानेन्द्र मिल्नुपर्ने बताएका हुन् । राष्ट्रियता बचाउने एक मात्र विकल्प काँग्रेस र पूर्वराजा मिल्नु रहेको जिकिर उनको छ । काँग्रेसले पूर्वराजासँग सहकार्य गर्दा काँग्रेसलाई मात्र नभई मुलुककै लागि
हितकर हुने तर्क उनले गरे । खड्काले वर्तमान काँग्रेस नेतृत्व राष्ट्रियताको मामलामा गम्भीर नरहेको आरोप पनि लगाए । कम्युनिष्टसँग अनावश्यक साँठगाँठ गरेका कारण काँग्रेसले आफ्नो वैचारिक पहिचान गुमाएको भन्दै गुमेको पहिचान फिर्ता गर्न ज्ञानेन्द्रसँग मिल्नै पर्ने जिकिर उनले गरे । हिन्दू राष्ट्र अभियानका संयोजकसमेत रहेका खड्काले यसअघि हिन्दू गणतन्त्रको वकालत गर्दै आएका थिए । पूर्वराजा शाहले झापाको दमकमा झण्डै एक महिना बसेर राजतन्त्र फर्काउने योजनाबारे निकतस्थसँग परामर्श गरेका बेला खड्काको यस्तो भनाइ बाहिर आएको हो ।
Posted by www.Nepalmother.com at 3:34 PM